Umqondiso: Nxibelelana ngeSMS, i-imeyile, iTwitter nakuFacebook | Martech Zone
Umqondiso: Nxibelelana ngeSMS, i-imeyile, iTwitter nakuFacebook
NgoLwesihlanu, Septemba 6, 2013 NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari, 2017 Douglas Karr
Uphawu liqonga elihlanganisiweyo lamashishini okulawula, ukubeka iliso kunye nokulinganisa iinzame zawo zokuthengisa kuwo onke amajelo eselfowuni, ezentlalo, i-imeyile kunye newebhu. Ngokusisiseko, i-CRM + yentengiso yeselfowuni + yokuthengisa nge-imeyile + nolawulo lweendaba zosasazo.
Siyakholelwa ukuba umsebenzi wentengiso uye usiba nzima ngakumbi ngenxa yokwanda ngokukhawuleza kwamajelo entengiso, kunye nezixhobo zokuzilawula. Isoftware yethu inceda iinkampani zilawule ngokulula iinzame zazo zentengiso kwindawo enye esembindini ngelixa zibonelela ngesifinyezo esimanyanisiweyo sesiseko sabathengi.
Iindawo eziphambili zeqonga leMpawu zezi:
Dashboard -Zisa konke ukuthengisa kunye nemisebenzi kunye kwideshibhodi enye, ukuthintela ukugcina iinkqubo zesoftware.
Ukulawula Abafowunelwa -Lungelelanisa bonke abafowunelwa kwintengiso kwindawo yogcino lwentengiso.
Iincwadana ze-imeyile -Khetha kwilayibrari yazo yokwakhiwa kwangaphambili, iitemplate zeimeyile ezilungiselelwe ukuhamba ukuze uzisebenzise njengesiqhelo okanye wenze ngokwezifiso ukuthanda kwakho.
Imiyalezo ebhaliweyo -Thumela imiyalezo ebhaliweyo, ebuthathaka ngexesha.
Ukupapashwa kwezentlalo -Thumela uhlaziyo kuFacebook nakuTwitter, ishedyuli yohlaziyo lonikezelo lwexesha elizayo kunye nokunciphisa ii-URL zokucofa umkhondo.
Ukubeka iliso kwezentlalo -Ukulawula amanethiwekhi amaninzi eendaba ezikwideshibhodi enye, ukulandelela abalandeli bakho kunye nabalandeli kunye nokujonga incoko kuthungelwano lwentlalo.
Imihla yokuLungisa -Yila ukulungelelaniswa okuhamba-hambayo, iphepha lokufika ngokwesiko kunye neefom zokungena. Ukukhuthaza ngomyalezo obhaliweyo, i-imeyile okanye uthungelwano lwasentlalweni.
Iibhondi -Yila iwebhu okanye isicatshulwa esicacileyo esinokuhanjiswa ngomyalezo obhaliweyo, i-imeyile okanye imidiya yoluntu.
Lawula indawo -Ukujolisa kwindawo ekhethekileyo ye-imeyile kunye neetekisi- kunye nokubonelela ngokufikelela kwii-franchisees.
Uhlalutyo -Fumana ulwazi olunzulu lokuthengisa ngombono odityanisiweyo wabathengi bakho.
Uphawu I-imeyile kunye neetemplate zamaphepha okufika zingenziwa ngokwezifiso ngokupheleleyo. Umqondiso nawo unamandla API yokudityaniswa kweenkqubo zomntu wesithathu. Umqondiso wakhelwe phezu kwawo kwaye wenza igalelo kuwo Vula Umnikezi, njengokuba!
tags: Uhlalutyoamatikitiemail Marketingobumimaphephaindawo yentengiso esekwe kwindawoiphepha lokufika eliphathwayoIikhowudi zeQRuphawui-SMSukuthengisa kwezentlaloimiyalezo ebhaliweyo